Kuta Beach any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Kuta Beach any Bali. Indonezia
Kuta morontsiraka any Bali
Topimaso momba ny Kuta Beach any Bali
Ny Kuta Beach any Bali dia any atsimon'ny Bali, ao anatin'ny trano fisakafoanana Kuta... Fialam-boly isan-karazany no misy eto, manomboka amin'ny surf amin'ny clubclub. Kuta dia iray amin'ireo morontsiraka Bali malaza indrindra noho ny vidiny mirary sy ny safidy maro amin'ny fandaniam-potoana.
Ireo marika famantarana ny morontsiraka Kuta:
Fialamboly manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny maraina
Surfing ary izay rehetra ilainao
Ny fotodrafitrasa mandroso amin'ny morontsiraka dia tsy misy fampitahana manerana an'i Bali iray manontolo.
Any atsimon'i Kuta dia misy distrika elit misy trano fandraisam-bahiny lafo vidy. Ny fotodrafitrasa lehibe dia miompana amin'ny faritra atsinanana amin'ny morontsiraka. Eto ianao dia afaka miala sasatra amin'ny vidiny lafo sy isan-karazany.
Amin'ny ankapobeny, Kuta dia tsy mitovy amin'ny sisa amin'ny morontsirak'i Bali satria manana ny zavatra rehetra manomboka amin'ny clubclub ka hatramin'ny fotodrafitrasa fitaterana an-dranomasina.
Sekoly Surf any Kuta
Betsaka ny mpizahatany eto amin'ity torapasika ity. Rakotra fasika miloko maivana ny morontsiraka. Ny halavan'ny moron-dranomasina dia mahavariana - manodidina ny 4 km, ary ny sakany dia 30 ka hatramin'ny 40 m. Ny ambany akaikin'ny morontsiraka dia fisaka, tsy misy "tsy ampoizina" tsy mahafinaritra, malefaka ny fidinana ao anaty rano. Ny salan'isan'ny rano mandritra ny andro dia +30. Saingy, mandritra ny vanim-potoana manomboka amin'ny volana novambra ka hatramin'ny aprily (mandritra ny orana) dia mitondra potipoti-javatra mankeny amoron-dranomasina ny ony ankehitriny, ka izany no mahatonga azy io mandoto indraindray.
Fotodrafitrasa eo amin'ny tora-pasika Kuta
Ireo hazo sy kirihitra dia maniry amin'ny laharana maromaro manamorona ny morontsiraka. Ny aloka noforonin'izy ireo dia ahafahanao miafina amin'ny hafanana. Betsaka ny elo sy seunger an'ny masoandro any amin'ny afovoan-dranomasina.
Ny fotodrafitrasa amin'ity morontsiraka ity dia mivoatra tsara. ATM, supermarket ary toeram-piantsonana maro be no hita eto. Fivarotana maro no manaiky ny fandoavana karatra.
Ny fatiantoka sy ny loza ateraky ny morontsiraka Kuta
Anisan'ireo mpiala sasatra ao Kuta ny ankamaroan'ny tanora. Ny mozika dia lalaovina any amin'ny trano fisakafoanana sy fisotroana amin'ny alina. Raha ampitahaina amin'ireo toerana fizahan-tany malaza any Bali, Kuta Beach no toerana be tabataba indrindra. Ity no iray amin'ireo antony mahatonga ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina tsy mety amin'ny rehetra.
Ny antony faharoa dia ny haavon'ny onja avo eto. Ataon'izy ireo fotaka ny ranomasina akaikin'ny morontsiraka ary manelingelina ny lomano.
Be olona foana ny morontsiraka, ka be ny fako. Ny fanadiovana eny amoron-dranomasina dia atao amin'ny maraina miaraka amin'ny traktera, fa mandritra ny andro dia manangona fako marobe izay tsy maintsy zakainao izy.
Tokony hitandrina ianao any Kuta, satria malaza ny tranga fisolokiana sy halatra. Afaka manararaotra mora foana ny toe-piainan'ny olona noho izany izy ireo.
Tsy matory mihitsy i Kuta
Zavatra tokony hatao ao amin'ny Kuta Beach
Sekoly fitetezana surf +
Ny hetsika hetsika amoron-dranomasina rehetra.
Mandeha any amin'ny trano fisakafoanana.
Hangouts amin'ny fiainana alina.
Fitsidihana tobin-drano eo akaiky eo.
Ny Kuta Beach dia hita ao amin'ny tanàna misy ny anarana mitovy amin'ny atsimon'i Bali avy any andrefana. Somary somary avaratry ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Bali.
adiresy: Jl. Pantai Kuta, Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonezia
mandrindra: -8.719251, 115.168777
Kuta Beach amin'ny sari-tanin'i Bali
Kuta Beach amin'ny sarintany zanabolana Bali
Sarin'ny tora-pasika Kuta any Bali
Azo antoka fa tsy tora-pasika ho irery sy hangina ity
Kuta dia toerana tsara hijerena ny filentehan'ny masoandro
Amin'ny rivotra mahery sy amin'ny vanim-potoana ambany dia be ny fako mivoaka any amin'ny morontsirak'i Kuta
Ny fotodrafitrasan'i Kuta dia misy ny zavatra tadiavinao rehetra
Kuta amoron-dranomasina any atsimon'i Bali
Filentehan'ny masoandro avy tao amin'ny Beach Kuta
Betsaka ny sekoly ho an'ny mpialokaloka vao manomboka ao Kuta
Surf any Bali